भगवान सूर्यमा समर्पित हिन्दुहरुको एक माहान पर्व &#8211; छठ पर्व | Basobaas
भगवान सूर्यमा समर्पित हिन्दुहरुको एक माहान पर्व &#8211; छठ पर्व
छठ मात्रा (छठ मन्त्र)
आश ब्रम्हा च विष्णुष्च शिव: स्कन्द: प्रजापती:।
महेन्द्रोधनद: कालो यम: सोमो ह्यपाम्पति:।
एनमापत्सु क्रिच्छेषु कुन्तारेषु भयेशु च।
किर्त्यान पुरुष: कश्च विभवसुदती राघव।
आदित्यम् सर्बरकर्टररन कलाद्दाद्शम्युतमं।
पद्महस्त्सन्दे वन्दे सबैलो चालकभस्करमं।
छठ पर्व नेपाल र भारतको मिथिला क्षेत्रका मूल निवासीहरूले मनाउँछन्। यो चाड भगवान सूर्यलाई समर्पित हुन्छ। सूर्यलाई संस्कृतमा सूर्य भनिन्छ, छठ पर्ब भगवान सूर्यलाई पृथ्वीमा जीवन धान्नको लागि र मानिसजातिलाई निरन्तर आशिष्‌ दिनको लागि उहाँको आराधना गरेर धन्यवाद दिईन्छ।
सूर्य ऊर्जा प्रकृतिको स्रोत, ऊर्जाको देवता र जीवन-शक्तिका स्वामी मानिन्छ, छठमा कल्याण, समृद्धि र प्रगतिको लागि पूजा गरिन्छ। हिन्दूहरु का लागी सूर्यले धेरै रोग र रोगहरु लाई निको पार्न मद्दत गर्दछ। सूर्यलाई उपचारको स्रोतको रूपमा लिईन्छ। सूर्यलाई स्थिरता र समृद्धिको प्रतिक मानिन्छ। त्यसकारण, परिवारका सदस्य, साथीहरू र प्रियजनहरूको दीर्घायु र समृद्धि सुनिश्चित गर्न मानिसहरूले सूर्यको पूजा गर्छन्। त्यसैगरी छठ पर्बालाई डला छठ पनि भनिन्छ।
छठ पूजा कहिले हुन्छ ?
कार्तिक शुक्ला चतुर्थीदेखि कार्तिक शुक्ल सप्तमीसम्म याे पर्व मनाइन्छ । यो उत्सव अंग्रेजी पात्रोमा अक्टुबर वा नोभेम्बरमा पर्छ।
छठ चैत्र षष्ठीमा पनि मनाइन्छ, जुन ग्रीष्मको शुरुवात मार्च वा अप्रिलमा हो र यसलाई चैती छठ पनि भनिन्छ। कार्तिक सुक्ला शास्ती छट अधिक लोकप्रिय छ।
हामी छट पर्व कसरी मनाउँछौं ?
छठ चाड चार दिनको लागि मनाइन्छ। छट पर्वको रीतिथितिमा पवित्र नुहाउनु, बर्त बस्नु, लामो समयसम्म सूर्यको पूजा गर्नु र प्रसाद र अर्घालाई “उठेर भगवान सूर्य स्थापित गर्नु” जस्ता विधि गर्नुपर्छ । केही बरतालुहरु निरन्तर २४ घण्टा पानी बिना नै बर्त बस्छन्।
छठ पर्वमा फरक दिनहरुमा गरिने विधिहरु
पहिलो दिन : नाहा खा
नाहा खाको अर्थ नुहाउनु र खानु हो। यो छठ पूजाको पहिलो दिन हो। मानिसहरूले स्नान गर्छन्, प्राथमिकतामा पवित्र निवासमा उनीहरूको घर नजिकको नदीको पवित्र पानी घरमा ल्याउँछन्। घर वरपर सरसफाइ गर्छन् । भक्तहरूले यस दिन केवल एक छाक खाना खान्छन् ।
दोस्रो दिन : खरना / लोहन्डा
यो पंचमीको दिनमा छटभन्दा अघिल्लो दिन हो। यस दिन मानिसहरूले सूर्यास्त पछि साँझ मा अन्त हुने बर्त बस्छन् । पृथ्वीको पूजा पछि, खीर (चामलको खीर), केरा र पुरिको प्रसाद वितरण गरिन्छ। पानी बिना पनि अर्को २४ घण्टा बर्त बस्ने परम्परा छ।
तेस्रो दिन : छठ
यो तेस्रो दिन हो। यो कार्तिक शुक्ल षष्ठीमा पर्छ । यो दिन संझिया अर्घ्य (साँझको प्रसाद) गरिन्छ । पुरै दिन व्यक्तिहरू उनीहरूको घरमा प्रसाद तयार गर्दछन्। साँझमा पूरै परिवार भक्तसँगै नदीको किनार वा तालमा जान्छन् (जहाँ सजिलैसँग सूर्यको प्रकाश पुग्दछ) । काठमाडौंमा रानी पोखरीलाई अर्घाको लागि खोलिएको हुन्छ । त्यसैगरी जनकपुरमा, अर्घा गंगा सागरमा प्रस्तुत गरिन्छ।
भक्तहरूले घाम अस्ताउन प्रार्थना गर्दछन्। यो छठ पूजाको धेरै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। साँझमा मानिसहरू भेला हुन्छन् र संगीत र नृत्यको साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू प्रदर्शन गर्छन्। छठको साँझ गाएको लोक गीतले मिथिला प्रदेश र यसको वरपरको संस्कृति, सामाजिक संरचना, पौराणिक कथा र इतिहास झल्काउँछ। मानिसहरूले मैथिली, मगधी, र भोजपुरीमा गीतहरू गाउँछन्, जुन तीन मुख्य भाषाहरू नेपालको तराई र मधेश क्षेत्रमा बोलिन्छ। त्यहाँका क्षेत्र र परिवारहरू बीच पूजा र पूजा प्रदर्शनमा थोरै भिन्नताहरू छन्, तर मूल रूपमा सबैले समान चाडपर्व र आकर्षणको साथ समान उत्सव मनाउँछन्।
त्यसैगरी कोसी: तेस्रो दिन रात, कोसी सूर्य अस्ताएपछि आयोजित हुन्छ। बेलुका बत्ती बालेर (सूर्य) लाई सूर्य (अर्घा)। बत्तीहरू पाँच गन्ना टिकको चन्दवा अन्तर्गत राखिन्छन्। पाँचवटा लाठीले आयुर्वेदले वर्णन गरेको पञ्च तत्वबाट बनेको मानव शरीरलाई जनाउँछ। (पृथ्वी, पानी, आगो, हावा र ईथर वा आकाश) यो छठ पूजाको प्रतीकात्मक अनुष्ठान हो, विशेष गरी ती परिवारहरूमा जुन विवाह वा बच्चाको जन्म हालमा भएको छ। उज्यालो बत्तीहरूले सौर्य ऊर्जाको संकेत गर्दछ।
बिहनिया आराघ छठ पूजाको चौथो र अन्तिम दिन हो। बिहनिया अर्घा भनेको बिहानको प्रस्तावना हो। छठ पूजाको अन्तिम दिन सप्तमीमा भक्तहरू आफ्ना परिवार र साथीहरूसमेत सूर्योदय हुनु अघि नदीको किनारमा फेरि जान्छन्। तिनीहरूले उदाउँदो सूर्यलाई भेटी (अरग) गर्छन्। चाटपर्वको भक्तले बर्त तोडेर महोत्सवको अन्त्य हुन्छ। प्रसाद वितरण र परिवार र साथीहरूको भेला सहित उत्सव समाप्त हुन्छ।
छठ पूजाको पछाडि कथा
द्रौपदी र छठ
छठ पूजा महाभारतको अवधिमा फेला पार्न सकिन्छ। महाभारतमा छठ पूजाको संदर्भ छ। पांडवकी श्रीमती द्रौपदीमा कुष्ठरोग लगायत कुनै पनि किसिमको रोगलाई निको पार्न ठूलो शक्ति छ। उनको शक्तिको मुख्य कारण उनको पूजा र भगवान सूर्य (सूर्य देवता) को भक्ति हो। हिन्दूहरु भन्छन कि सूर्यमा धेरै रोगहरु लाई निको पार्ने असीमित शक्ति छ। सूर्यको पवित्र र दिव्य शक्तिले द्रौपतिलाई धेरै रोगहरू निको पार्न विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली महिला बनायो। द्रौपदी र भगवान सूर्यको स्मरणार्थ छठ पर्व सूर्य देवताको पूजा गरि मनाईन्छ ।
छठ पूजा र कर्णछठ पूजा वा सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य वारिसका छोरा योद्धा कर्ण द्वारा मनाइन्छ, जो प्रख्यात योद्धा थिए र उनको परोपकार प्रकृतिका लागि प्रसिद्ध थिए। सूर्य पूजा देखेर कर्ण लोकप्रिय र शक्तिशाली भएदेखि हिन्दुहरू पनि साहस, ख्याति, स्वास्थ्य, धन र समृद्धिका लागि सूर्य देवताको पूजा गर्छन्।